ဘဝမှတ်တိုင်: Cityscape – Start Theme Version : 3.0 APK ( All Android )
Cityscape – Start Theme Version : 3.0 APK ( All Android )
မိမိဖုန်းအတွက် လှပတဲ့ Theme အလန်းလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ Download ဆွဲပြီးထည့် လိုက်ရုံနဲ့ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ Theme ဒီဇိုင်းလေးကို ခံစားတွေ့မြင်ရမှာပါ။ Start Screen ကိုနှိပ်လိုက် ရုံနဲ့ facebook, twitter, flickr, Youtube, local weather forecasts, photo gallery စသည်တို့ကို မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာကို ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ Android : 2.2 နှင့်အထက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်...။
We know how much you care about your battery life so we’ve designed Start not to drain it. To give you maximum peace of mind, Start works perfectly with your native phone security. With Start you can:
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 5/16/2014 03:54:00 am